आश्चर्य, बर्थडे गिफ्टको रुपमा छोराले बुवालाई दिए हुन्डाई भर्ना कार | Automotive News Nepal
आश्चर्य, बर्थडे गिफ्टको रुपमा छोराले बुवालाई दिए हुन्डाई भर्ना कार १९ असोज, २०७५
छोराले बुवालाई बर्थडे गिफ्टको रुपमा कुनै सपनामै नचिताएको वस्तु दियो भने कति खुसी मिल्छ होला ? यो खुसी हेर्नका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको भिडियो हेरे पुग्छ ।
भारतको तेलंगानास्थित २२ वर्षिय तमन्ना लोहिथले आफ्नो बुवाको ५०औं बर्थडेको दिन यही कार्य गरे । उनको बुवा गाडीका निकै शौखिन । उनले सधै ठूलो साइजको कार प्रयोग गर्न चाहन्थे । तर छोराको पालनपोषण र शिक्षा तथा अन्य खुसीमै उनले पैसा खर्च गरे ।
लोहिथले पछि आफै काम गर्न थाले । उनी सफल व्यवसायी बने । त्यसपछि बुवाको ५०औं बर्थडे मनाउने समयमा उनले पहिले बुवाको आँखा हातले बन्द गरिदिए । त्यसपछि बुवाको हातमा केही चिज राखे । पछि उनले आँखा खोलेर हेर्दा हातमा गाडीको साँचो थियो ।
त्यो साँचो हुन्डाई भर्ना गाडीको थियो । बुवा निकै खुसी भए । त्यसपछि सपरिवार गाडीमा सयर गरे ।
हुन्डाई भर्ना पेट्रोल र डिजेल इन्जिन अप्सनमा उपलब्ध छ । बुवाले प्राप्त गरेको गाडी डिजेल अप्सनको हो । यसमा १.६ लिटरको इन्जिन छ, जसले १२६ बीएचपी पावर र २६० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यसमा ६–स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसन छ ।
नेपालमा हाल हुन्डाई भर्नाको सो मोडलको गाडीको मूल्य ४५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको नयाँ सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा केन्द्र एक कार्यक्रमका बीच...
फर्मुला वान रेसमा प्रयोग गरिन्छ रोलेक्स घडी, के छ त्यस्तो विशेषता ?
रोलेक्स घडी र मोटर स्पोर्ट्स एक अर्काका परिपूरक बनेका छन् । मोटर स्पोर्ट्सको क्ष...
डुकाटीले भारतमा ल्यायो करिब २५ लाखको स्पोर्ट बाइक
इटालियन बाइक निर्माता कम्पनी डुकाटीले आफ्नो पावरफुल बाइक डुकाटी ९५९ प्यानिगेल को...